Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka bilaabmay meel u dhow deegaanka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka bilaabmay meel u dhow deegaanka Tukaraq
Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka bilaabmay meel u dhow deegaanka Tukaraq
May 15, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka bilaabmay meel u dhow deegaanka Tukaraq. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa ka bilaabmay meel u dhow deegaanka Tukaraq, sida uu sheegay masuul.
Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Garoowe maanta oo Talaado ah, Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali ayaa Somaliland ku eedeeyay in ay weerar ku soo qaadeen ciidamadooda ku sugan duleedka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Waxa uu intaas ku daray in Somaliland ciidamadeeda la jabiyay oo dib loo riixay.
Dhawaacyadii askarta labada dhinac ayaa loo qaaday Garoowe iyo Laascaano, saraakiil caafimaad ayaa u sheegay Puntland Mirror.
Hadda ma jiraan wax dagaal ah sababtoo ah roobab culus ayaa ka bilaabmay deegaanka, ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay.
Si kastoo ay ahaataba, isku dhicii maanta oo Talaado ah ayaa ahaa kii ugu weynaa oo u dhaxeeya labada dhinac tan iyo markii ay bilaabmatay khilaafka Tukaraq bishii Janaayo ee sanadkan.
January 10, 2018 Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Somaliland ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto weerarka gardarada ah ay ku soo qaatay dhulka Puntland
January 16, 2018 Wasiirka Warfaafinta Puntland oo Somaliland ku eedeeyay in ay ka dambeyso dhibbaatooyinka Al-Shabaab ee buuraha Galgala
December 26, 2017 Somaliland oo dib u dhigtay dhismaha saldhiga millatari ee Imaaraatka Carabta ee Berbera
Heavy fighting between Puntland and Somaliland erupts near Tukaraq
Madaxweyne Farmaajo oo codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dhaliilay shirka Kismaayo ee maamul goboleedyada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa dhaliilay shirka Kismaayo ee ay maamul goboleedyadu ku yeelan doonaan. Cabdixakiim Cumar Camay oo warbaahinta kula hadlayay Garoowe maanta oo Talaado ah ayaa yiri: “Waxaan rabaa arrin kale [...]
Ugu yaraan sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho galabta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka iyo caafimaadka. Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ku qarxay [...]
Kooxda Ahlu Sunna Waljamaaca iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya oo heshiis ka gaaray arrimaha dhismaha Galmudug
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda Ahlu Sunna Waljamaaca iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiis ka gaaray arrimaha dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Heshiis ayaa dhigaya in 20 xildhibaan kooxda Ahlu Sunna laga siiyo 89 xubnood ee golaha baarlamaanka [...]